Interview Archives - 1aviagem.com
Anyị gbara nwanyị nwanyị Mexico ajụjụ ọnụ ma weta Ndụmọdụ na Atụmatụ Coronavirus na Mexico
Anyị gbara otu nwanyị onye Mexico ajụjụ ọnụ ma weta Aro maka Corona Virus na Atụmatụ banyere Mexico! Ezutere m Érika n’oge nri abalị na Rio de Janeiro. Ọ sonyeere ndị otu anyị, anyị mekwara otu okpokoro. Érika na-achọkarị ihe gbasara okpokoro anyị. Anyị nwere ndị…
GỤKWUO Anyị gbara nwanyị nwanyị Mexico ajụjụ ọnụ ma weta Ndụmọdụ na Atụmatụ Coronavirus na Mexico
Ajụjụ ọnụ a South Africa. E nwekwara mgbanwe a na-atụghị anya ya n’etiti ajụjụ ọnụ ahụ.
Tupu ịmalite, Ekwesịrị m ikwu na a gbara ajụjụ ọnụ a kpam kpam. Anyị enweghị oge iji chee maka edemede ya naanị na iji ike eme ya. Na ntụnye nke Lexiegh. Ọ chọrọ ihe dị mma! Thezọ kachasị mma iji mezuo nke a ga-abụ ime ya dịka nke a, na-eji ekwentị ịdekọ na…
GỤKWUO Ajụjụ ọnụ a South Africa. E nwekwara mgbanwe a na-atụghị anya ya n’etiti ajụjụ ọnụ ahụ.
Kedu ihe ị ga-atụ anya na Philippines? Maka Filipino
Taa, anyị ga-amatakwu ihe gbasara obodo a - agwaetiti a na-akpọ Philippines. Anyị malitere ajụjụ ọnụ a iji mụtakwuo banyere obodo a, nke bụ nnukwu agwaetiti Eshia mara mma. O nweghịkwa onye ka mma ịgwa anyị gbasara ya karịa onye Filipinz. Ọ bụ ya mere mụ na enyi m Filipino na-ekwu okwu taa - Jeff. M zutere ...
GỤKWUO Kedu ihe ị ga-atụ anya na Philippines? Maka Filipino
Ajụjụ maka Hungary - Aro maka Hungary, Australia na Brazil.
Ya mere, taa, anyị na-aga ịgwa mmadụ okwu, ma ọ dịkarịa ala ịmata. A mụrụ ya na Hungary, gafee China na ndụ n'Australia! Na nso nso a gara Brazil na mba Latin America. Ana m agwa Chris taa. Anyị zutere n'oge njem nke malitere na Finland ma kwụsị na Germany, na-agafere Russia. M ...
GỤKWUO Ajụjụ maka Hungary - Aro maka Hungary, Australia na Brazil.
Belarus maka nwa amaala Belarus
Ndewo onye obula, ya mere, ka anyi kwuo okwu banyere Belarus taa. Iji mee nke a, ọ dịghị ihe dị mma karịa ịjụ nwa amaala Belarus ajụjụ ọnụ. Nke ahụ bụ mgbe mụ na enyi m hụrụ n'anya bụ Kate na-akparịta ụka a. Anyị zutere mgbe m mere njem mbụ ahụ. Ọ na-eleta Minsk na ọ bụ onye ndu obodo ...
GỤKWUO Belarus maka nwa amaala Belarus
Ajụjụ Ọnụ: Olee otú Canada si? site na Canada
Taa, anyị ga-ekwukwa banyere Canada mba a dị ukwuu nke North America. Oge a dị ka nwa amaala Canada. Kedu ka anyị si mara ibe anyị? M zutere Andy na Finland n'oge njem site na Russia na mba ndị agbata obi. Ọ bụ onye mụ na ya bi n'oge njem ahụ. Anyị na netwọk na-ejikarị aka ...
GỤKWUO Ajụjụ Ọnụ: Olee otú Canada si? site na Canada
Peru maka ọhụụ nke Peruvian na ọhụụ nke onye njem nleta
Obi dị m ụtọ na m na-ebipụta akwụkwọ a maka gị. Echere m na ọ bụ ihe kachasị mma na Blog a ruo ugbu a. Iche! Maka oge mbụ, 1aviagem.com, anyị na-enweta echiche nke obodo site na nwa amaala, yana site na onye nleta. Iji mee ka ọ dịkwuo mfe maka onye ọ bụla gụrụ ịmara onye na-ekwu okwu ...
GỤKWUO Peru maka ọhụụ nke Peruvian na ọhụụ nke onye njem nleta
Colombia maka Colombia
Interview with a Colombian, Taa anyị malitere foto ọhụrụ nke 1aviagem.com nke ga - eme ka obodo ahụ chee na ọ bụ nwaazụ. malite na Colombia. Anyị gbara ajụjụ ọnụ Felipe Rivera, enyi m. Anyị zutere n'ụlọ akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ na Brasilia. Ọ bịara Brazil ịga ọmụmụ ihe. N'ezie, ọ mụtara ngwa ngwa ikwu Portuguese, ...
GỤKWUO Colombia maka Colombia